Qolka cusub ee Airbus Single-Aisle Airspace wuxuu raaxo ku daraa duulimaadyada Lufthansa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qolka cusub ee Airbus Single-Aisle Airspace wuxuu raaxo ku daraa duulimaadyada Lufthansa
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Lufthansa waxay mar kale samaysay xulashada hal-abuurnimo iyo rafcaan rakaab, iyada oo kor u qaadday baarka dadweynaha duulaya guud ahaan si ay u la kulmaan heerka xiga, Airbus oo hormuud u ah hal-abuurka qolka.
Lufthansa waxay bilawday inay ku shaqayso diyaaraddeedii ugu horraysay iyada oo leh qol keli-keli-socod ah.
In ka badan 80 ka mid ah diyaaradaha Lufthansa ee A320 ayaa lagu qalabeyn doonaa qol cusub.
Lufthansa waxay sii wadaa inay xoogga saarto badeecadda qaaliga ah ee martideeda.
Lufthansa waxay hawlaheeda ku bilowday diyaaraddii ugu horreysay ee A320 Qoys-A321neo-oo ay ku jirto Airbus qolkeeda cusub ee Hal-Aisle Airspace. Markay sidaas samaynayso, diyaaradu waxay noqonaysaa hawlwadeenkii ugu horreeyay ee Yurub ah ee soo bandhiga astaamaha cusub ee Airspace ee rakaabka saaran diyaaradda Qoyska A320. Sannadkii 2018 Kooxda Lufthansa, oo muddo dheer macmiil u ahayd A320 Qoyska, waxay dooratay inay qalabeyso in ka badan 80 ka mid ah diyaaradaheeda cusub ee A320 Qoyska iyagoo ka dalbanaya Airbus oo wata qollada Airspace.
Astaamaha cusub ee Hawada waxaa ka mid ah: darbiyada dhinaceeda oo dhuuban si loogu helo boos shaqsiyeed dheeri ah oo heer garbaha ah; aragtiyo ka wanaagsan daaqadaha iyaga oo leh gembiyadooda dib loo qaabeeyey iyo daaqadaha daaqadaha oo si buuxda isugu dhafan; bacaha waaweyn ee dusha sare ee 60% bacaha ka badan; teknolojiyadda iftiiminta iftiinka ee ugu dambeysay ee buuxa; LED 'shidan' aagga laga soo galo '; iyo musqulo cusub oo leh astaamo aan taabasho lahayn oo nadiif ah iyo meelaha lidka ku ah jeermiska.
"Lufthansa waxay mar kale samaysay xulashada hal-abuurnimo iyo rafcaan rakaab, iyadoo kor u qaadeysa heerka dadweynaha duulaya guud ahaan inay la kulmaan heerka xiga, Airbus hormuudka u ah hal -abuurka qolka ”, ayuu yiri Christian Scherer, Sarkaalka Sare ee Ganacsiga Airbus iyo Madaxa Caalamiga ah. "Waan ku faraxsanahay inaan soo dhoweeyo mid ka mid ah shuraakadayada muddada dheer, Lufthansa, si uu u noqdo hawlwadeenkii ugu horreeyay ee reer Yurub ee A320neo Qoyska Hawada Qoyska. Ma sugi karo inaan ku duulo mid ka mid ah diyaaradahan. ”
"Si kasta oo ay dhibaatadu tahay, waxaan sii wadnaa inaan xoogga saarno alaab qiimo leh oo loogu talagalay martideena," ayuu xoojinayaa Heike Birlenbach, Madaxa Khibradda Macaamiisha, Kooxda Lufthansa. “Anaga ahaan, lacagta caymiska micnaheedu waa bixinta dhammaan dalabyada rakaabkayaga mar walba tayo sare leh, shaqsi ahaan iyo khuseeya. Ainpace Cabin-ka cusub, waxaan si weyn u hagaajineynaa khibradda safarka ee waddooyinka gaagaaban iyo dejinta halbeegga warshadaha cusub. ”
Lufthansa wuxuu ka shaqeynayay qoyska A320 ilaa 1980-meeyadii wuxuuna ahaa shaqaalihii ugu horreeyay ee A321 iyo A320neo. Kooxda diyaaraddu waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn ee ka shaqeeya Airbus adduunka oo dhan.
Dhammaadkii bishii Luulyo 2021, Qoyska A320neo waxay ka heleen in ka badan 7,400 amaro in ka badan macaamiisha 120 adduunka oo dhan.